ကြောက်စရာကောင်းသော ပဒူကောင်အန္တရာယ်နှင့် အတုပ်ခံရပါက ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ - Real News
Home Knowledge ကြောက်စရာကောင်းသော ပဒူကောင်အန္တရာယ်နှင့် အတုပ်ခံရပါက ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ
ကြောက်စရာကောင်းသော ပဒူကောင်အန္တရာယ်နှင့် အတုပ်ခံရပါက ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ်က ရန်ကုန် ကုတင်၅၀၀ ဆေးရုံနဲ့ တစ်ကီလိုမီတာ မကွာတဲ့နေရာ လမ်းမတော် ၁ မျက်နှာချင်းဆိုင် church ကျောင်းဝင်းထဲမှာ လူတစ်ဦး ပဒူတုပ်လို့ hornet bite ကြောင့် သေတယ်။ ဒီလို မိုးဦးကျ ဇွန်လမှာပါပဲ။ အဲဒီအချိန်က ပဒူကောင် ဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိတယ် ရေးထားခဲ့တာတောင် ခုရက်ပိုင်း ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။တိုတိုပြောရင် ကိုက်တဲ့ ပဒူကောင်ကို ရိုက်မိတာနဲ့ သူ့ဆီက pheromone ဆိုတဲ့ ဓါတ်တစ်ခု အနံ့ တစ်ခုထွက်လာတယ်။ ဒီအနံ့ဟာ ပဒူအုံက ကျန် ပဒူကောင်တွေကို “ငါတို့ရန်သူ ရောက်နေပြီ တိုက်ခိုက်ကြ” လို့ တပ်လှန့်သံပါပဲ။ ဒါကြောင့် အုံနဲ့ကျင်း နဲ့ ဝိုင်းကိုက်ကြတာပါ။ ပြေးလို့မလွတ်ပါဘူး။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အသေးစိတ်ရေးထားလို့ သိချင်ရင် ပြန်ရှာ ဖတ်ပါ။
ခုပြောပြမှာက ပဒူတုပ်တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လဲပါပဲ။ ပဒူ hornet က ဖင်က ဆူးနဲ့ ထိုးလိုက်တာပါပဲ။ ဒီအခါခန္ဓာကိုယ်က ဓါတ်မတည့်တဲ့အတွက် histamine ဓါတ်တွေ ထွက်ပါတယ်။ တုပ်ခံရတဲ့နေရာမှာ ဖောင်းမယ် ယောင်မယ် နာကျင်မယ် ယားယံမယ်။ တချက်၂ချက်ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ သေနိုင်လောက်တဲ့ အချက်ရေဟာ လူကြီးမှာ ၁၀၀၀ လောက် ကလေးမှာ ၅၀၀ လောက်လို့ဆိုပါတယ်။ အပေါ်မှာ ဆိုထားသလို ကိုက်တာနဲ့ လိမ်မာပါးနပ်စွာ ရှောင်နိုင်ရင် ကိုက်ခံရတဲ့ အချက်ရေ နည်းပါလိမ့်မယ်။ တအုံလုံးထွက်ကိုက်ရင်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ သေနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်နှစ်ချက် ကိုက်တာတော့ ဆူးလေးနှုတ် ဆေးထည့် မလုပ်တတ်ရင် ဆေးခန်းပြပါလေ။ အကောင်ကိုက်ချက်န ည်း လို့ လိမ်းရတဲ့ဆေးကတော့ Anthisan oitment တဲ့။ ပူတာအို နန်းပန်းဒင်အတွက် ဆေးတွေစီစဉ်တော့ ဒီဆေး ထည့်ပေးဖို့ သတိရတယ်။ ဈေးကွက်မှာ ဝယ်မရလို့ မပေးလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အကောင်ငယ်များ (မြွေမပါ). ကိုက်တာအတွက် သင့်တဲ့လိမ်းဆေးပါ။
ကိုက်ခံရတဲ့ အချက်ရေ နည်းသော်လည်း ဒီ sting နဲ့ ဓါတ်မတည့်သူအဖို့ အလွန်အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ မြောက်ဒဂုံက အဖြစ်ဟာ ကိုက်ချက်နည်းပေမယ့် ဓါတ်မတည့်လို့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်ရတယ် ယူဆပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေက ကိုက်တဲ့ နေရာ အပြင် မကိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ ယားယံမယ်။ ဘုတွေအပိန့်တွေ ထလာတယ်။ မျက်ခွံ မျက်နှာ နှာခေါင်း နှုတ်ခမ်း ယောင်လာမယ်။ အသက်ရှုခက်မယ်။ ရှူရင် အသံမြည်မယ်။ ခေါင်းအုံ ခေါင်းမူးမယ်။ သွေးပေါင်ကျမယ်။ ဗိုက်ထဲက ရစ်နာမယ်။ အော့ချင်အန်ချင်မယ်။ အန်မယ်။ ဝမ်းသွားမယ်။ ဒါတွေဟာ သေလောက်တဲ့ အန္တရာယ်လို့ သဘောပေါက်ပါ။ ဆေးရုံကို အမြန်ပြေးပါ။တကယ်တော့ တကိုယ်လုံးယောင်ရာမှာ လေပြွန်ဝပါ ယောင်ရမ်းပြီး ပိတ်ဆို့လို့အသက်မရှုနိုင်လို့ သွေးပေါင်ကျလို့ သေရ တာပါ။ ဒီလို histamine တွေ အများအပြား ထွက်တာအတွက် ပြန်ဖြေတဲ့ဆေးဟာ antihistamine “ဘာမီတွန်” တဲ့။ အခြား အသက်ကယ်ဖို့ လိုက်ရတဲ့ ဆေးတွေတော့ ရှိပါသေးတယ်။ မှတ်ထားရမှာက ပဒူတုပ်ရင် မပေါ့ရ။ သေနိုင်ပါ တယ်။ သေလောက်တဲ့ လက္ခဏာတွေ သိထားပြီး ဆေးရုံ အမြန် ပြေးဖို့ပါပဲ။
ဒီ ပျားတူကောင်အကြောင်း သေနိုင်လောက်အောင် အန္တရာယ်ရှိလို့ ဗဟုသုတ သိထားရအောင် ပြန်share ပါတယ်။ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ. ပျားတူကောင် (hornet) ပျားတူကောင် (hornet) တွေရဲ့ အသိုက်တွေနား မသွားပါနဲ့။ တစ်ကောင်လာကိုက်လျှင် လည်း အဲဒီအကောင်ကို မသတ်ပါနဲ့။ ထွက်ပြေးပါ။ အစားအစာ အမျိုးမျိုးနဲ့ မတည့်သူတွေ အင်းဆက်ကိုက်မှုတွေနဲ့ မတည့်သူတွေအတွက် အသက်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ တကိုယ်လုံးဖူးယောင်လာတဲ့အခါ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းလည်း အတွင်းမှာ ဖူးယောင်လာမှာဖြစ်တော့ အသက်ရှူကြပ်လာပြီး ဆေးရုံ မြန်မြန် မရောက်လျှင် သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရုံကို ချက်ခြင်းပြေးပြီး ကုသမှုခံယူပါ။ အစား ဆေးတွေနဲ့ မတည့်မှု (အလာဂျီ) အပြင်းအထန်ဖြစ်တဲ့ လူနာတွေကို ကုမယ့် အသက်ကယ်ဆေးတွေ ဆရာဝန်တွေမှာ အဆင်သင့် ရှိနေမှာပါ။
အစားအစာတွေမှာ ထည့်တဲ့ လူလုပ်အနံ့တွေဖြစ်တဲ့ ငှက်ပျောသီးနံ့ ပန်းသီးနံ့တွေနဲ့ C5 alcohols and C10 esters တွေပါတဲ့ အနံ့တွေ လူကိုယ်မှာဖြစ်ဖြစ် အဝတ်တွေ တခြားကိုယ်နဲ့အတူ သယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာ ပေနေလို့ အနံ့ရ တဲ့ အခါမှာလည်း လာရောက်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ ပန်းသီးနံ့ ငှက်ပျောသီးနံ့တွေပါတဲ့ မုန့်တွေစားပြီး အသိုက်နား လျှောက်သွားရန် မသင့်ပါ။ပျားတူကောင် အသိုက်တွေကို ဖယ်ရှားတဲ့အခါ ဖယ်ရှားသူက ပျားတုတ်မည့်ရန်ကို တစ်ကိုယ်လုံးကို ကာကွယ်တဲ့ ဝတ်စုံ ဝတ်ထားပြီး ကျန်သူတွေက အနားမှာ မနေပါနဲ့။ အာရှတိုက်က Asian Giant Hornet အာရှ ပျားတူကောင် အကြီးစား နဲ့ Japanese Giant Hornet ဂျပန် ပျားတူကောင်အကြီးစေား တွေက အဆိပ်အပြင်းဆုံးဆိုပါတယ်။ ပျားတူကောင်တွေ ဟာ လူတွေအတွက် အစားအစာ သီးနှံထုတ်လုပ်မှုမှာ အရေးပါတဲ့ပျားတွေရဲ့ အဓိကရန်သူဖြစ်တယ်။ ပျားတူကောင်တွေ ဟာ ပျားအုံတွေထဲဝင်ပြီး ပျားတွေအားလုံးကို သတ်ပြီး ပျားသလက်တွေကို သိမ်းပိုက် လုယူကြတယ်။ ပျားတူကောင် အကောင် ၃၀ ဟာ ပျားအုံတခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ ပျားအကောင် သုံသောင်းကို သုံးနာရီကျော်ကျော်အတွင်းမှာ သတ်ပစ်နိုင် ကြ တယ်။ နကျယ်ကောင်တွေ (wasp) အဆိပ်နဲ့ မတည့်သူတွေဟာ ပျားတူကောင် အဆိပ်နဲ့လည်း မတည့်ပါ။
ပျားတူအုံကို မိုက်မဲတဲ့ သတ္တိပြချင်တာနဲ့ ခဲနဲ့ပေါက် တုတ်နဲ့ ထိုးပြီးပြေးမယ့် နားမလည်တဲ့ လူငယ်လေးတွေ (ကလေး တွေ) ကို ပြောပြရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အပြေး ချန်ပီယံတောင် ဘယ်လိုမျှ ပြေးမလွတ်နိုင်ပါ။ စက္ကန့် အနည်းငယ် အတွင်း ဝိုင်းအုံ အကို်က်ခံရမယ်။ ပျားတူတွေဟာ တစက္ကန့်အတွင်းမှာ ပေ ၂၀ ခန့် ပျံနိုင်တဲ့ အမြန်နှုန်းရှိပါတယ်။ တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ လေထဲမှာ အကြိမ်၁၀၀ ခန့် အတောင်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်မှု။ ။ ပျားတူနဲ့ ပျားတွေ အုံနားမှာ ကိုယ်ရောက်နေတာ မသိဘဲ၊ ငှက်ပျောသီးလို အသီးတစ်ခုခု စားနေလို့ ဒါမှမဟုတ် အသီးနံ့ မွှေးနေတဲ့ အချိုရည် တစ်ခုခုကို သောက်နေတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းတို့ မျက်နှာတို့ အသီးရေပေနေတဲ့ လက်တို့ကို ပျားတို့ ပျားတူတို့ လာနားတဲ့အခါ တခါတလေ အကောင်းဆုံးကတော့ လက်ဖြင့် အပြင်းအထန် မောင်းထုတ် ခြင်း မပြုဘဲ ငြိမ်နေလိုက်ခြင်းပါဘဲ။ သူစပ်စုလို့ အားရပြီး ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါကြမှဘဲ ထွက်ပြေးပေရော့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ အသီးအနံ့ရှိတဲ့ အချိုရေသောက်နေတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းတွေ မေးတွေ လက်တွေမှာ အချိုရည်တွေ မပေကျံအောင် သောက်ခြင်းပါဘဲ။ ဒါတောင်မှ အသီးအချိုရေ ပုလင်း အဝတို့ ဖရဲသီးခြမ်းတို့ သရက်သီး စိတ်တွေကို ပျားတွေဝိုင်းလာရင် အသီးတွေရော အချိုရည်ပုလင်းတွေကိုပါ မြေပေါ်မှာ ညင်သာစွာချပြီး ပျားတူတွေ ပျားတွေကို အချိုရေ စတုဒီသာတုိုက်ပြီး ကိုယ်လွတ်ရာ အမြန်သွားထွားနိုင်ပါတယ်။ (ပျားတွေနဲ့ကတော့ ကြုံဖူးတဲ့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်တွေပါ။)ထပ်ပြောပါဦးမယ်။ အဆင်မပြေလို့ ပျားတူ တစ်ကောင်ရဲ့ အကိုက်ခံလို့ကတော့ ပြေးပါ။ သိပ်ဆိုးဝါးစွာ အာလာဂျီ ဒဏ် (ပျားဆိပ်သင့်ဒဏ်) ခံစားရရင် ဆေးရုံ ဆရာဝန်တွေဆီပြေးပါ။ ကိုယ့် ဆရာဝန်က ပေးထားတဲ့ အရေးပေါ်အသက်ကယ် ဆေး ကို အသက်ရှု စပြီး မကြပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ အမြန်သောက်နို်င်ပါတယ်။ အင်တာနက်က ဆေးမီးတိုတွေကို အားမကိုးပါနဲ့။
Credit-Maung Maung Myint
Previous articleလူထောင်ကျော်အတွက်အကျိုးပြုစေမယ့်တံတားကို ပင်စင်လစာတွေနဲ့ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ သူ
Next articleဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် ဆေးကုသခွင့်လက်မှတ် အသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ဒေါက်တာ နန်းမွေစံ
အိမ်အသစ်လေးမှာစိတ်အသစ်နဲ့ မိသားစုအတူဖြတ်သန်းနေတဲ့ အောင်လ
(၄၅) ခေါက် (၄၅) ရက်တိတိ အဓိဌာန်ရမည့် အိမ်တွင်းစီးပွားတက် လာဘ်ပွင့်ဂါထာ
ကြောက်စရာ ကလေးများ နဲ့ အ နီးကပ် မှာရှိ ပီး သတိမမူမိတဲ့ အဆိပ်
နှလုံးအားနည်းတဲ့သူတွေ မကြည့်ကြပါနဲ့လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
ရုပ်ရည်ချောမောဖို့ အပြင် အပျိုစစ်၊ မစစ်လည်း စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားရဲမေ လျောက်ရပုံအဆင့်အဆင့်
အလုပ်ကောင်း ၀င်ငွေကောင်း အကြွေးကြေ အဆင်ပြေ အစီအရင်
နေပြင်းပြင်းမှာ သွေးတိုးပြီးခေါင်းမူးလာပါကချက်ခြင်းသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ